May 24, 2019 - CeleLove
May 24, 2019 Cele Love 0
ဖုန်းဝယ်မပေးလို့ ရည်းစားကို လူပုံလည် ပါး ၅၂ ချက် ရိုက်တဲ့ မိန်းကလေး (ရုပ်သံ) မေလ ၂၀ ရက်နေ့ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ချစ်သူများနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ တရုတ်လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာ “#520” (မေ ၂၀ ကိုယ်စားပြု) တက်ခ်လေးတွေချိပ်ပြီး ချစ်သူရည်းစားတွေ ပြုံးပျော်မြူးနေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ […]
မန္တလေးမြို့တွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက် လူ (၁) ဦးသေဆုံးကာ (၇) ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ (ရုပ်သံ)
မန္တလေးမြို့တွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက် လူ (၁) ဦးသေဆုံးကာ (၇) ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ (ရုပ်သံ) မေလ ( ၂၃ ) ရက် ညပိုင်း ( ၉ ) နာရီအချိန်က မန္တလေးမြို့ တွင် လေပြင်းတိုက် ခတ် မှု ကြေ […]
၁ ပတ်အတွင်း ဝမ်းဗိုက်ချပ်စေဖို့ မနက်ခင်းမှာ ပြုလုပ်ပေးလို့ရတဲ့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း (၅) မျိုး
၁ ပတ်အတွင်း ဝမ်းဗိုက်ချပ်စေဖို့ မနက်ခင်းမှာ ပြုလုပ်ပေးလို့ရတဲ့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း (၅) မျိုး ဝမ်းဗိုက်ချပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ အစားအသောက်ကိုလည်း ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်နော်။ ဝမ်းဗိုက်ချပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ပြုလုပ်ပေးလို့ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော် …။ လေ့ကျင့်ခန်း ( ၁ ) အရင်ဆုံး ခြေဆင်းပြီးထိုင်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို […]
မယားကိုသစ်​ပင်​မှာတွဲလောင်​ချည်​ပြီးတော့.ယောကျာ်းနဲ့ အဖော် တစ်ဦး က ရက်စက်ခဲ့တဲ့ အမှု ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်း နောင်ဘိုလမ်းဖူးခရိုင်ထဲမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ဇနီးကို လက်နှစ်ဖက်ကြိုးတုပ် သစ်ပင်မှာ တွဲလွဲချည်ပြီး မီးခိုးငွေ့တွေနဲ့ မှိုင်းတိုက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် …။ အဲဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို Ai Aum ဆိုတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်နဲ့ မေ […]
သေမင်းကို အံတုရင်ဆိုင်ပြန်လာခဲ့တဲ့ ကစ်ကစ်ကို လန်းဆန်းစွာ မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက် အရမ်းကို ဝမ်းသာမိပါတယ် 🙏🙏🙏…
သေမင်းကို အံတုရင်ဆိုင်ပြန်လာခဲ့တဲ့ ကစ်ကစ်ကို လန်းဆန်းစွာ မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက် အရမ်းကို ဝမ်းသာမိပါတယ် 🙏🙏🙏… ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအမှုဆောင်တစ်ချို့နဲ့ ကစ်ကစ်ထံသွားရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ ဦးဝင်းမြိုင် အဖေဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကနေ ခန့်ခန့်ညားညား သရုပ်ဆောင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ ဦးဝင်းမြိုင်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ မသိတဲ့သူ မရှိလောက်အောင် အရမ်းကို ရှားပါးလွန်းလှပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ ပီပြင်တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို အပီအပြင် သရုပ်ဆောင်ပြသပေးလေ့ရှိတဲ့ ဦးဝင်မြိုင်ကတော့ […]
ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်မှာ ဒီလိုကြီးအထိဖြစ်နေကြပြီလား ဘုရားရင်ပြင်မှာ မာဆက်တို့ ကေတီဗွီ များဖွင့်လာတော့မှာလား ??? ” အရှက် / အကြောက် တရား ” *မြန်မာနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအောက်မှာ ပြုမူနေထိုင်ကြသူတွေပါ အရှက်တရား အကြောက်တရားဆိုတာရှိတယ် …။ ဒါပေမဲ့ခုခောတ်လူငယ်တော်တော်များများဟာ ဘာသာ သာသနာဆိုတာလဲမထိန်းသိမ်း ဘုရားကျောင်းကန် ရဟန်းသံဃာတော်ရှေ့မှာ မောင်နှင့်နှမ သားနဲ့အမိအမြင်မတော်တဲ့ […]
လိင်ကိစ္စပြုနေသံ အင်းးးးအင်းးးအားးအားးးးများကို တရားရုံးသို့တင်သွင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ တရားလိုသင်းသင်း ….. အလှမယ် သင်းသင်းက သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်ကို ကာမလိမ်လည်ရယူမှု ပုဒ်မ (၄၁၇) ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည့်အမှုကို ယနေ့ မေ ၂၄ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တရားရုံးတွင် ၉ ကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့သည် …. ။ […]
မိဘတွေစွန့်ပြစ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဘဝကနေပန်းရောင်းခဲ့ပြီး အိမ်ပိုင်၊ကားပိုင်၊ဝန်ပိုပါ ပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကိုကောင်းမြတ် သူဟာ မိဘမဲ့ ပန်းသည်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်…..သူ့ဘ၀ရဲ့ နည်းလမ်းကောင်းက ငွေများများရှာပြီး နည်းနည်းသုံးဖို့ပါပဲ….. ငွေရှာသလောက် အသုံးကိုလည်းလျော့ခဲ့တာကြောင့် လမ်းဘေးဈေးရောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် နေစရာအိမ် ၊ စီးစရာကားနဲ့ ခြံပို၊ မြေပိုတောင် သူ့မှာ ပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်… ။ စွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ မိဘတွေကို တမ်းတလွမ်းပေမယ့် […]
ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လများတွင် မိုးများကာ ရေကြီး မြေပြိုမှု အန္တရာယ် သတိထားကြဖို့ ဦးထွန်းလွင် သတိပေး
ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လများတွင် မိုးများကာ ရေကြီး မြေပြိုမှု အန္တရာယ် သတိထားကြဖို့ ဦးထွန်းလွင် သတိပေး ဇွန်+ဇူလိုင်+သြဂုတ်လများ တွင် မိုးများလာနိုင်ပြီး ရေကြီး မြေပြိုမှု အန္တရာယ် သတိထားကြဖို့ ဦးထွန်းလွင် သတိပေးနေပါတယ် …. ။ […]
သွားချေးတွေကို သဘာဝအတိုင်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်သောအစွမ်းထက်နည်းလမ်း (6) ခု
သွားချေးတွေကို သဘာဝအတိုင်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်သောအစွမ်းထက်နည်းလမ်း (6) ခု လူတစ်ယောက်မှာ အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးသော အချက်ကတော့ သူ့ရဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ အပြုံးတစ်ချက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကံဆိုးစွာပဲ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကဖင်းဓာတ် လွန်ကဲစွာ စားသုံးခြင်းနဲ့ သွားကို သေချာဂရုမစိုက်ခြင်း စတာတွေကြောင့် သွားကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် လုပ်နေကျ အလေ့အကျင့်လေးတွေကနေပြီး သွားချေးဖြစ်ခြင်း […]